ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးက ဝေဖန် ပြောဆို | The FNG
World and Regional
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးက ဝေဖန် ပြောဆို
August 6, 2012 · by 21 South News	· in ပြည်ပသတင်း.	·
ကာတာ နိုင်ငံ အခြေစိုက် အယ်(လ)ဂျာဇီးယား ရုပ်သံ နဲ့အင်္ဂလန် နိုင်ငံ လန်ဒန် အခြေစိုက် မြန်မာ
မာ ရိုဟင်ဂျာ အစည်း အရုံး (ယူကေ) နဲ့တွေ့ ဆုံ မှု မှာ BROUK က ထွန်းခင် က မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ
ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဗြိတိသျှ ပါလီမန် မှာ စကား ပြော ခဲ့ ပေမယ့် ရိုဟင်ဂျာ
အကြောင်း ထည့် သွင်း ပြောကြား ခဲ့ တာ မရှိ ဘူး ၊ ဘီဘီစီ မြန်မာ ပိုင်း ဘာသာ အစီအစဉ် မှာ ရို
ဟင်ဂျာ ဘာသာ စကား အစီအစဉ် ပါ ရှိပေမယ့် သူက ရိုဟင်ဂျာ ဆို တာ ကျွန်မ မသိဘူး လို့ပြော
သွား ခဲ့ တယ် လို့သူက ဝေဖန် ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာ တွေ ကို တိုင်းရင်းသား အဖြစ် အခွင့် အရေး ပေး ဖို့၊ နိုင်ငံ သား အဖြစ် တန်းတူ အခွင့်
အရေး ပေး ဖို့ကို လဲ လွှတ်တော် မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က အဆို တင် သွင်း သင့် ကြောင်း
ရခိုင်ဒေသ မှာ ရှိ တဲ့ ရိုဟင် ဂျာ တွေ ရဲ့အိမ် တွေ ဖျက်ဆီးခံ ရတယ် ၊ မီးရှို့ခံရတယ်။ ရိုဟင်ဂျာ
ပြည်သူ တွေ ဟာ နှိပ်စက် ခံရတယ်။ ရေနဲ့အစား အသောက် တွေ မရ ဘူး အဲဒီ အတွက် ကုလ
လုံခြုံရေး ကောင်စီ ၊ ကုလ အထွေထွေ ညီလာခံ တို့က ဒါ ကို အရေး တကြီး နဲ့ကိုင် တွယ် သင့်
တယ် လို့ သူက မေးမြန်း တဲ့ အစီ အစဉ် မှာ ပြောကြား ခဲ့ ပါတယ်။
မေ လ နှောင်း ပိုင်း နဲ့ဇွန်လ အတွင်း က ဖြစ်ပွား ခဲ့ တဲ့ ရခိုင် ပြည်နယ် အတွင်း မငြိမ် သက် မှု
တွေ မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ တွင်း ကို ကျုးကျော် ၀င်ရောက် နေ ထိုင် တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ တွေ ဟာ ရခိုင်လူ
မျိုး တွေ ကို သတ်ဖြတ် မှု နဲ့နေအိမ် မီး ရှို့မှု တွေ ပြု လုပ် ခဲ့ တယ် လို့မြန်မာ သတင်းဌာန တွေ
က ရေးသား ဖော်ပြ ခဲ့ ကြ ပါတယ်။
အမေရိကန် အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင် ကိုလည်း အယ်(လ)
ဂျာဇီးယား Stream အစီအစဉ် က နေ တွေ့ ဆုံ မေးမြန်း ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီတွေ့ ဆုံ မေးမြန်း မှု မှာ ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင် က ပါလီမန် ဒီမိုကရေစီ ခောတ် ၀န်ကြီးချုပ်
ဦးနု လက်ထက် တုန်း က ရိုဟင်ဂျာ တွေ ကို နိုင်ငံ သား ဖြစ်ခွင့် ပေး ခဲ့ ပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဦးနေ၀င်း
ဦးဆောင် တဲ့ စစ်အာဏာ သိမ်းမှု စတင် တဲ့ အချိန်မှာ အဲဒီ အခွင့် အရေး တွေ ဟာ ၁၈၀ ဒီဂရီ
ပြောင်းလဲ သွား တယ် လို့သူက ထောက်ပြ ပြော ဆို ပါတယ်။
ရခိုင်ဒေသ မှာ ဖြစ်နေတယ့် လူမျိုး တုံး သတ်ဖြတ်မှု တွေ ကို ကုလ နဲ့နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်း
တွေ ပါဝင်ဆောင် ရွက် ခြင်း မရှိ ဘဲ ဖြေရှင်း နိုင်မှာ မဟုတ် ဘူး လို့သူက ဆို ပါတယ်။
၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံ သား ဖြစ်မှု ဆိုင်ရာ ဥပဒေ ကို လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင် ပြီး
လွှတ်တော် မှာ ဆွေးနွေး သင့်တယ် လို့သူ က ဆိုပါတယ်။
မြန်မာ နိုင်ငံ ရခိုင် ပြည်နယ် ဒေသ မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တွေ ပြု ပြီး ပြန်လည် ထွက်ခွာ သွား
ပြီ ဖြစ်တဲ့ ကုလသမဂ္ဂ လူ့ အခွင့် အရေး အထူးသံ မစ္စတာ အိုဟေး ကင်တာနား ကျယ်ပြန့် တဲ့
စုံစမ်း စစ်ဆေး မှု တွေ ပြု လုပ် ဖို့ပြော ကြား ခဲ့ ပါတယ်။
၈၈ မျိုး ဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ကိုကိုကြီး ကတော့ ဒေသခံ ရခိုင် တွေ ရဲ့အရေး ကို
ထည့် သွင်း ပြောကြား ခြင်း မရှိ ဘဲ ရိုဟင်ဂျာ အရေး ကို ဘဲ အာ ရုံစိုက် ပြော ကြားတာ ဟာ မေး
ခွန်း ထုတ် စရာ ဖြစ်တယ် လို့ဘီဘီစီ သတင်း ဌာန နဲ့မေးမြန်း မှု မှာ ပြောကြား ခဲ့ ပါတယ်။
(ဗီဒီယို ၁ သည် အင်္ဂလန် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်း ဆောင် ထွန်းခင် နှင့် တွေ့ ဆုံ မှု ဖြစ် ပြီး ဗီဒီယို ၂
သည် အမေရိကန် အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် ဒေါက်တာ ၀ါကာ အူဒင် နှင့် တွေ့ ဆုံ
လူမှု မီဒီယာ ကွန်ယက် တွင် သတင်း ကို ဖြန့် ဝေရန်
Strip at Las Vegas, Nevada
← ပါးစပ်နဲ့ကာမဂုဏ် ခံစားမှု က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချစ်တင်းနှောမှုမှာ ပိုအရေးပါလာ Update
ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ( ၆.၈.၁၂ ) မှ ( ၁၃.၈.၁၂ ) ထိတပတ်စာ ဗေဒင်ဟောစာတမ်း →
14 responses to “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင် နှစ်ဦးက ဝေဖန် ပြောဆို”
ဗိုလ်မိုးကြိုး October 28, 2012 at 10:41 pm · ·
သူတို့လူမျိုးတွေက တကယ်ပဲဂွတီးဂွကျနိုင်လှပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ပြဿနာဖြစ်ကာမှ ငါတို့အမျိုးမထိနဲ့လေးဘာလေးနဲ့……သူတို့လူမျိုးတွေက ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကိုယ့်လူမျိုးကိုစော်ကားတာကြတော့ကော သူတို့က ဟေ့ကောင်တွေမင်းတို့မလုပ်ကြနဲ့လို့ တားခဲ့ကြဖူးသလား……..။ နောက်ပြီး ခုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ကို ဝေဖန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ဥပဒေမဲ့လုပ်ရပ်တစ်ခုကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး နိုင်ငံရေး၊ လူမျိုးရေးအသွင် ဖန်တီးခဲ့တယ်လို့ယူဆမိတယ်။ အဲ့တော့ သူတို့က သူတို့လူမျိုးတွေအားလုံးကို ပြောရမယ်ဆိုရင်ဗျာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ သူတို့လူမျိုးအားလုံးကို သူတို့နိုင်ငံ ပြန်ခေါ်ပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်ချုပ်နိုင်မလား။ ခုကြမှ တောင်ပြောမြောက်ပြောနဲ့ အားလုံးဟာ သူတို့လုပ်နေတဲ့ကိစ္စတော်တော်များများဟာ အသလွတ် အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကမ္ဘာရဲ့ထောက်ပံကြေးကို မျှော်ကိုးနေတာရောမဖြစ်နေိုင်ဘူးလား
nyein August 17, 2012 at 7:14 pm · ·
လွယ်ပါတယ် ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်တွေရယ် ဘာသာတူ oicနိုင်ငံတွေကို ခင်များတို့ တတွေ ရွေပြောင်းသွားရင် အခုလို ပြသနာတွေလဲ မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ သူတို့ဆီမှာ ပြောင်းရွေ ကျ ပါလားဗျ ကုလကို တင်စရာ မလိုပါဘူးဗျ တင်ရမှာက နိုင်ငံပြောင်းရွေခွင့်ဗျ
a man who preferatruth August 13, 2012 at 3:49 pm · ·
who is talking rohingya? if you have empathy for rohingya you can call your home or your country anytime because now tun khin i would like to ask you how much you got from this case and really you can accept your home in this rohingya may be 1 or2person ? are you really love them you don’t fake and cheat news you don’t make in among of Muslim countries..Nowadays how we feeling that we have brain and brilliant thought that’s why we can consider actually what happens in myanmar…so that don’t Lie and Don’t cheat ..and don’t make business using by hostage…
Theodo August 12, 2012 at 12:36 am · ·
ချီးတုန်းရယ်ဝက်ဆီရယ်စားပီးပြောကြည့်ပါလား ပိုပီပြင်သွားရော ပြောရက်လိုက်တဲ့ပါးစပ်ကြီးတွေ
မြန်မာမျိုးချစ် August 10, 2012 at 6:26 pm · ·
ရိုဟင်ဂျာ ခေါင်းဆောင်ကြီးခင်ဗျား..။ ခင်ဗျားကြီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ရန်တိုက်ပေးနေတာပဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျူးကျော်သူဂျပန်တွေ အင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးပီပီ ကျူးကျော်သူ ခင်ဗျားတို့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လည်း ကျုပ်တို့ နိင်ငံကနေမောင်းထုတ် မယ်ဆိုတာ ကျုပ်တို့ တစ်မျိုးသားလုံးက ယုံကြည်တယ်။ ကိုယ့်လာရာလမ်းကိုသာပြန်တော့..။။
့honey August 10, 2012 at 7:33 am · ·
Myanmar7 August 9, 2012 at 8:49 pm · ·
we don’t want Rohinja! fuck off Rohinjya from our golden country!
justice man August 9, 2012 at 2:46 pm · ·
မြန်မာလူမျိုးထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာရှိလို့ လား။မရှိတာကိုအရှိလုပ်လို့ တော့မရနိုင်ဘူးလေ။မူရင်းဒေသကတောင် လက်မခံတာ မြန်မာပြည်ကရောလက်ခံပေးရမှာလား။ သမိုင်းထဲမှာသေသေချာချာပြန်ရှာကြည့်ပါဦးလို့ ကျေးဇူးရှင်နျစ်ယောက်ကို အကြံပေးပါရစေ။
tom cruise August 8, 2012 at 1:48 pm · ·
ready for fight any challenge.are you bangali “wakaudin”?
Julia August 7, 2012 at 10:45 am · ·
If 300,000 Rohingya live in Refugee camps, then SEND THEM to Musilms Countries!!
wina ung August 6, 2012 at 7:09 pm · ·
Tun Kin are you Burmese or musilmr mix burmese.
Rhohinjar, We don’t know these .
If can you speak burmese your are burmese, if you can not speak burmese
your are British.
Aung Zaw Naing (@AungZawNaing3) August 6, 2012 at 1:46 pm · ·
Hi Tun Khin & Wakahauddin, your propaganda campaign world wide isasuccess since u guys enhanced on religious issuse (b/w muslims & buddhist) . But we are fighting back now, we been silenced for more than 50 years under military dictator, now we are speaking out. U call urselves Rohingyas , when this term was invented, ask to any bengali resided in Rakhine state, they wl reply as Bengali Muslims, they never heard of Rohingyas. So, from the name , u are bullshitting. But u cannot lie to history , bengali migrated to Myanmar after 1st Anglo-burman world on 1824, then so on, until now. Many indians too migrated during colony rule of Burma.but they returned to India after 1960. But why bengali are not returning, because at that time, their home place, East Pakistan / now as Bangledesh, was in war, became the killing field, more bengali flee to northern Rakhine. After all, you bengali belong to bengal state. So, why don’t u go back to your home, we wl not at any cost grant you the citizenships. Anyway, my friend , we wl not hesitate to help you in humanitarian way. So, pls kindly go back to your own land. Thanks.
naing August 6, 2012 at 1:32 pm · ·
၀ါကာ အူဒင် ၊သူ ပြောပုံဟန်က Bangladesh တစ်ယောက် ပြောပုံပေါက်ပါတယ်၊
myomintun August 6, 2012 at 9:02 am · ·
fuck tun khin and akar oudin.you always said lies.who was hijacked and who was terrorist.we invite all persons to check true story.your bingali rohingya every time told lie.who was break to human right.you said always human right,are you know human right?you need to learn more.why not receive your’s bangladish government to you?i know you are never said true situation,true story.you always said lie history.
ဗိုလ်ချုပ် မှုး ကြီး ဟောင်း ရဲ့ယတြာ ဆင်းတုတော် တွေ ဝေဖန် မှု တွေက် ထွက် ပေါ်နေ
ကြီးထွား လာ တဲ့ လင်တု ၊ မယား တု ဈေး ကွက်
မင်းသမီး ရှရွန် တိတ် နဲ့လူခုနှစ် ဦး ကို သတ် ဖြတ် ခဲ့သည့် စိတ္တဇ ၀ါဒမှိုင်း သွင်း လူသတ် သမား ချားမေဆန် ကွယ် လွန်
ဒေါ်လာ နှစ် ဘီလျှံ နီးပါး ချမ်း သာ တဲ့ မူဂါဘီ ပါတီ နဲ့ပြည်သူ က အလို မရှိ တော့ တရား ၀င် ကြွေး ကျော် ကာ တစ်နိုင်ငံ လုံး နီး ပါး လမ်း ပေါ် ထွက် ဆန္ဒပြ
ရက်ကာ မှာ မင်းမူ ခဲ့ တဲ့ IS စစ်သွေးကြွ တွေ ရခိုင် မြောက်ပိုင်း ကို လှိမ့်ဝင် ဖို့ပြင်
In Search of Freedom
Popular on FNG
ဟုမ်းမိတ် များ ကို စီးပွား ဖြစ်ထုတ်လုပ်လာ
နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ်ထားပြန်
မြန်မာ စစ်တပ် က ဒုံးလက်နက် ပစ်လွှတ် ရေး နဲ့ကာကွယ်ရေး တပ် ဖွဲ့ကို စတင် တည် ထောင်
တဏှာ ရာဂ ကို နှိုးဆော် ထား တဲ့ နစ်ကီ မီနာခ်ျ ရဲ့ရဲ့Paper မဂ္ဂဇင်း မျက် နှာ ဖုံး ပုံ အရမ်း ဟော့
ရိုးရာ နှင့် အီလက်ထိရိုဂီတ ပေါင်းစပ်ဖျော်ဖြေမှုအား သားစိုး ဆန်ဖရန် တွင်ကျင်းပမည်
ရောင်းကောင်း တဲ့ စာအုပ်
Best Selling book in North America
Yangon City in Evening by Reuben Teo
History of Broadcast and Mass Media Communication
CBS color studio – 1954. Probably Studio 72 in New York. TK-40 cameras and TP-10 monitors
Princess Elizabeth (Now Queen Elizabeth) her broadcast debut at BBC Studio in London during World War 2
A field loud-speaker is set up to broadcast propaganda to German soldiers, somewhere in Russia, on April 21, 1942.
this photograph of peter and pan was typical of many published by the picture postabritish weekly publication during the war showing children contributing to the war effort in this case helping mum while dad was away at the front
Iva Toguri reenacts her wartime radio broadcasts for an Army signal corps film crew.
Post World War2NBC Studio
View fng.mm’s profile on Facebook
View freedomnews_us’s profile on Twitter